2 Storey private house – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
2 Storey private house properties
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) ။ ရန်ကုန် ။ Lakhs 5,200.00
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) ။ ရန်ကုန် ။
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် လုံးချင်းအိမ်သစ်အရောင်း ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၃၆ ရပ်ကွက် နေရာကောင်း လမ်းသန့် စစ်တောင်းလမ်းမကြီးနှင့်သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကြီးအနီး စစ်တောင်းစီးတီးမတ်နှင့်ဈေးနီးကျောင်းနီးနေရာကောင်း မြေအကျယ် ၅၀×၅၀ အိမ်ကတော့ အခန်းဖွင့်ကျယ်ကျယ်လေးတွေနှင့်ဆောက်ထားတဲ့နေချင်စရာအိမ်လေးတစ်လုံးပါ မြေအမျိုးအစား – ပါမစ်မြေ (အခွန်ဆောင်စရာမလိုဝယ်ယူသူတိုက်ရိုက်အမည်ဖောက်လို့ရသည်)2RC အောက်ထပ် 1Master Bedroom 1 Single Room ဧည့်ခန်း ထမင်းစားခန်း မီးဖိုချောင် ကားထားဖို့သီးသန့်နေရာ အပေါ်ထပ်3Master Bedrooms ဘုရားခန်း ဝရန်တာပါ အခန်းတိုင်း Aircom တပ်ဆင်ပြီး ခန်းစီးလိုက်ကာလေးတွေတပ်ဆင်ထားပေးလို့ အသင့်နေထိုင်နိုင်တဲ့အသစ်စစ်စစ်လုံးချင်းတိုက်သစ်လေးပါခင်ဗျာ့. လူကြီးမင်းတို့ဒီအိမ်လေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့အကြိုက်တွေ့သွားစေမယ့်အိမ်လေးပါ . ရောင်းဈေး- သိန်း၅၂၀၀ (ညှိနှိုင်း) စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းလေးကြိုဆက်ပါခင်ဗျာ့ စိတ်ချမ်းသာစေမှု့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဝန်ဆောင်မှု့ကိုပေးရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါ. ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09795727121, 09794390261 Viber: […]
2500 sq ft5beds5baths
တောင်ဥက္ကလာ ရန်ကုန်။ Lakhs 5,000.00
၂ ထပ်တိုက်ပါ အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ တောင်ဥက္ကလာ ၁၁ ရပ်ကွက် မြေအမျိုးအစား-ဂရန်အမည်ပေါက် မြေအကျယ်- 40’×60′ ft ပတ်ဝန်းကျင် တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသည်။ သိန်း 5000 (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com